Ihe mmachi njem na-adịghị mkpa nke US mebiri njem nlegharị anya Mexico
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Mexico » Ihe mmachi njem na-adịghị mkpa nke US mebiri njem nlegharị anya Mexico
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Njem nlegharị anya Mexico na-ewute site na mmachi njem na-adịghị mkpa US
Ọ bụ ezie na gọọmentị Mexico na -ekwe ka njem banye na mba ahụ, US na -etinye mmachi na njem ọpụpụ.
Mexico nwere ike ịnwe mfu nke ndị njem US ka mgbochi COVID-19 na-aga n'ihu
N’afọ 2020, US mefuru ihe kachasị na njem ọpụpụ na ọnụego mmefu kwa onye bi na mkpokọta $ 3,505.
Canada bụ ahịa isi mmalite nke abụọ maka Mexico na $ 1,576 maka onye bi na ya.
Colombia bụ ahịa azụmaahịa nke atọ kachasị elu na $ 1,286 kwa onye bi.
Njem na-adịghị mkpa gafee oke ala dị n'etiti US na Mexico ka amachibidoro Ọnwa iri na asaa gara aga site na mbido oria ojoo COVID-17 na nke a nwere ike ịnwe mmetụta na-emebi ihe n'ihi na Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Mexico.
Akụkọ kacha ọhụrụ na -ekpughe na na 2020, US nọrọ ihe kachasị na njem na -apụ apụ yana nkezi na -emefu otu onye bi na mkpokọta $ 3,505. Canada bụ ahịa ahịa nke abụọ kacha elu na $ 1,576, Colombia sochiri na $ 1,286.
Ọ bụ ezie na gọọmentị Mexico na -ekwe ka njem banye na mba ahụ, US na -etinye mmachi na njem ọpụpụ. Ebe ọ bụ na US bụ ahịa isi mmalite kacha emefu ego maka ndị ọbịa, na-ebute ụzọ n'ihu ahịa isi mmalite ndị ọzọ dị ka Argentina, Colombia na UK, ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Mexico ga-enwe mmachi nke njem na-adịghị mkpa site na US.
Dị ka nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, ndị njem dị njikere ịga ogologo njem, nke Mexico nwere ike ịdabere. Nnyocha ahụ chọpụtara na n'ime mmadụ 1,442 ndị zara ajụjụ ọnụ n'ụwa niile, 37% kwuru na ha dị njikere ime njem mba ofesi na kọntinent ọzọ. N'ime obere oge, ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na Mexico nwere ike nwee ike ịdabere n'ahịa ezumike ogologo oge, na-ezube ndị nchekwa ọrịa na-achọ 'ndepụta ịwụ', njem post-COVID-19.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ njem nwere ike ka na-agbasi mbọ ike ịkwụ ụgwọ maka mfu nke onye njem US na-emefu nnukwu ego. Na 2020 83% nke ndị niile bịarutere Mexico sitere na US, na -egosi ntụkwasị obi obodo ahụ n'ahịa mpụga US.
N'agbanyeghị mgbochi ndị dị ugbu a, Mexico nwere ike nweta mmụba nke ndị enyi na ndị ikwu na -eleta (VFR) na -eme njem site na US mgbe enyere ya ohere, n'ihi na nke a bụ ihe kacha akwalite njem n'etiti mba abụọ a. Otú ọ dị, ndị njem nwere ike nweta nkwanye ugwu n'ego ụgbọ elu n'ihi ịrị elu na mberede. Agbanyeghị, ọchịchọ ịhụ ndị anyị hụrụ n'anya ka ogologo oge gachara ga -agba ndị njem ume ịkwụ ọnụ ahịa ndị a dị elu, na -abara ụgbọ elu uru.